Su'aal Dufcadda 787-9
sano 3 3 todobaad ka hor #70 by Leeh12378
Kooxda 'Hi Rikooo kooxda' ma jiraan wax suurtagal ah ama laftiisaba ama kuwa horumariya ee wax ku biirin kara bartaada internetka ee cajiibka ah, iyagoo abuuraya boodhka 787-9. Waxaan raadinayay mid hal sano ah, welina wali ma helin. hadaad ka fekereyso inaad diyaarsato diyaaraddaan waxaan noqonayaa kan ugu horreeya ee soo dejisan.
Hayso shaqada weyn ee aad qabato.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: anshax, Danielita
sano 3 3 todobaad ka hor #79 by Gh0stRider203
Just looked oo aanan arag mid ka mid ah halkan, Hase ahaatee waxaan isha ku hayaa waxyaabo iyo haddii mid ka mid ah halkan ka soo baxo, waan ogaan doonaa!
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 48
sano 3 maalmood ka hor 2 #211 by Dariussssss
Waxay xitaa ka sii fiicnaan lahayd haddii aan heli karno xirmo 787, oo leh dhammaan noocyada 3 hal meel. Waxaan isku dayi doonaa inaan halkaan weydiisto.
sano 3 maalin ka hor 1 #216 by JanneAir15
Taasi waa fikrad fiican!
sano 3 maalin ka hor 1 #220 by Gh0stRider203
JanneAir15 ayaa qoray: Taasi waa fikrad wanaagsan!
sano 3 maalin ka hor 1 #222 by Tirsib ah
Waxaa laga yaabaa inay isku daydo inay hesho 787 qaab muuqaal ah iyo VC oo lagu soo dejiyey
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: danwas
2 sano 1 bil ka hor - 2 sano 1 bil ka hor #895 by Josh13215
cusbooneysii 787 iminka 787 dhabta ah ee 737 halkii XNUMX? Sidee ku saabsan?
Last edit: 2 sano 1 bil ka hor by Josh13215. Sababta: qalad naxwe ahaaneed
Board Categories About Rikoooo - Ku soo dhawow Xubnaha New - Box soo jeedina - Farriin Forums Flight lagtiisa - FSX - FSX Fasalka Buugga - FS2004 - Prepar3D - X-Plane warbaahinta - Screenshots - Videos katabaan hadal - Fly Gurtida - Waa maxay iyo halkee ayaad duuli maanta - Duulista Real lagtiisa oo kale horyaalka - Qabille Flight duulimaadka Gear - - About FlightGear - DCS SERIES - Cabbirka Sims